Best 24 Chest Atụmatụ Echiche Ebumnuche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ojiji nke tattoos aghọọla ihe anyị na-ahụ na ụfọdụ ndị na-eri ahụ n'ihi obi ike na ịtụnanya dị n'ahụ ya. isi iyi
Ndị a nwere ike ịbụ ndị mara mma, ndị na-atụ egwu, ndị dị ịtụnanya, ndị na-atụ egwu na ọbụna ndị na-atụ egwu. Ihe niile dabere na ihe ịchọrọ imezu mgbe ịchịrị. isi iyi
Egbu egbugbu na-ewu ewu. Nhọrọ #designs nwere ike ịbụ otu n'ime ebe kachasị egbu egbu ịchọta n'ebe ọ bụla n'ụwa. isi iyi
Ị nwere ike ịchọ ịma ebe a na-etinye igbe ahụ mgbe ọ na-abịa ịdịpụta egbu egbu. Ndị ikom ahụ nwere ike ikwu na igbe ahụ si n'akụkụ nke dị nso n'olu, anyị na-ekwu okwu banyere clavicles ruo n'olu ahụ. Nke a bụ ihe ndị ikom ahụ nwere ike ịkọwa dịka obi ha. isi iyi
Ụmụ nwanyị nwere ike ịsị na akụkụ obi adịghị etinye aka n'obi ha. Nke a apụtaghị na ị gaghị enwe ike igbugbuo ebe ndị a. isi iyi
N'ihe banyere ihe ejiji akpụkpọ anụ, ọ dịghị ihe na-agaghị aga. I kwesiri imata na otu n'ime echiche efu nke na-eme mgbe ị na-ekwu okwu banyere akwara obi bụ na ịpụta abụghị ihe mgbu. isi iyi
Ihe mere ha ji chee na nke a bụ n'ihi na ha kwenyere n'ụzọ doro anya na mpaghara mpaghara nke ụmụ nwoke na ebe umunwanyi nọ ebe a na-ahụ akpa. isi iyi
Anyị ga-agwa gị na ị nwere ike ikwu na ọ bụ akụkụ nke obi. Tupu ị nwee ike ịhọrọ imepụta obi gị, gbalịa ma hụ na ị na-ahọrọ imewe nke ga-ezuru okè na protuberances ndị dị na obi na oghere ndị ahụ. isi iyi
Echekwala eserese na ịntanetị. N'ụzọ dị ịtụnanya, akara ndị a na-egosipụta na ịntanetị ga-adị nnọọ iche n'ahụ gị. isi iyi
Echere obi dị na 20th narị afọ. Mgbe ị na-eji ejiji obi, jide n'aka na ị nwere atụmatụ ahụ zuru oke nke ga-agwa gị akụkọ. isi iyi
Otutu ndi mmadu ndi na-aduta ihe ndi mmadu na-ekwu na ha na-eme ihe di otua ma obu ihe akpiri ahu bu n'obi ha. Anyị ga-agwa gị mgbe niile na ihe kachasị mma i nwere ike ime tupu ị gaa maka igbu egbu bụ iji mee nchọpụta gị. isi iyi
Egbu egbugbu aghọwo ihe na-ewu ewu n'ebe niile ebe ọ bụ ya mere anyị ji hụ na ọ dọtara ụzọ dịgasị iche iche na nhazi ahụ ga-ahụ naanị mgbe ị nwere ezigbo onye na-egbu egbu. Leba anya na ụdị ọrịa a ma gwa anyị na ọ mara mma. isi iyi
Enwere ike ịbanye na ọnya obi na akụkụ ọ bụla nke ahụ. Mgbe ụfọdụ, anyị na-ahụ ka a na-ahụ tattoos. Ekele maka ụdị dị iche iche nke ndị na-egbu egbu na gburugburu ụwa. Ị pụghị ịhụ ọnya obi ma ghara ile anya ya abụọ. isi iyi
Ọ dị mkpa ka ị ghọta na nsị igbu egbu egbu aghọwo ihe dị mkpa. Ị kwesịrị iji oge anyị nyochaa site na ntanetịime ntanetị nke nnụnụ tupu ị họrọ ịhọrọ. Oge mbu ị ga - eme bụ onye na - egbu egbu nke ga - agwa gị ihe dị mma. isi iyi
E nwere nnụnụ dị iche iche; ụlọ obibi na nnụnụ ọhịa nke ụdị na ụdị niile. Nnụnụ ọ bụla nwere ihe dị mkpa nke bụ ihe kpatara anyị kwesịrị iji kpachara anya maka ụdị igbu egbugbu nke anyị ga-eji. Were dị ka ọmụmaatụ, ụlọnga ma ọ bụ ugoloọma ejikọtara ya na anwansi ojii na amoosu mgbe a maara nke ọma nduru nduru iji gosi udo na ịdị ọcha. isi iyi
Ụzọ dị mfe iji zaa ajụjụ a bụ ịlele egbugbu ị na-achọ. Ogbugbu obi na-anọchite anya eze n'ọtụtụ ebe. Taa, ihe na-emekarị na-eto eto na e nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji nweta otu maka onwe gị. isi iyi
O di nkpa ka i gh ota na onyonyo egbu egbu abawo uru. Ị kwesịrị iwepụta oge anyị na-enyocha site na ntanetị n'ịntanetị nke chests tupu ị họrọ ịhọrọ. isi iyi
Cheedị echiche, ọkpụkpụ ọrịa a adịghị eche ihe ịma aka ịmepụta. Site na ezigbo ụlọ n'ụlọ ọrụ ebe ị ga-enweta ya, ị ga-enwe ike inwe otu dị ka nke a. isi iyi
Ogbugbu nwoke a na-egbu egbu agaghị aga n'oge na-adịghị anya. Akpanyere nwoke ahụ ga-adọrọ mmasị ya na onye ahụ nakwa n'ihi na ọ dị larịị na sara mbara, a pụrụ ime ọtụtụ eserese ebe a. isi iyi
Ị na-amasị nke a? Oge mbu ị ga - eme bụ onye na - egbu egbu nke ga - agwa gị ihe dị mma. isi iyi
Mgbe ị na-egbu egbu dị ka nke a, wepụta oge ma jụọ ajụjụ ma mata ebe ịchọrọ ka otu dị ka nke a. isi iyi
Pịa ebe a maka Chepụta Chepụta Tattoo
koi ika tattooegbugbu egbugbuegbu egbu hennaỤdị ekpomkpaegbu egbu mmiriazụ azụọdụm ọdụmagbụrụ eboudara okooko osisina-adọ aka mmaegbu egbu maka ụmụ nwokendị na-egbuke egbukennụnụmehndi imeweUche obiarịlịka arịlịkana-egbu egbungwusi pusin'olu oludi na nwunyeaka akaegbu egbuegbu egbu ebighi ebiakara ntụpọaka mma akaụkwụ akaenyí egbu egbuegbu egbu osisi lotusegwu egwuzodiac akara akaramma tattoosọnwa tattoosụmụnne mgbuakpị akpịechiche egbugbuegbu egbu diamondokpueze okpuezendị mmụọ oziima ima mmaegbu egbu egbuNtuba ntugharirip tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu okpuAnkle Tattoosaka akaEgwu ugoakwara obienyi kacha mma enyiGeometric Tattoos